Posted by Tranquillus | Apr 25, 2020 | Xafiiska
Waxaad u badan tahay inaad maqashay Microsoft Outlook. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu diro loona helo farriimaha. Laakiin sidoo kale wuxuu bixiyaa maaraynta jadwalkiisa iyo shaqadiisa maalinlaha ah. Wax aad u faa'iido badan si looga helo wax soo saarka. Laakiin sidaas oo kale caan uma ahan sababtaas oo keliya. Tiro cayiman oo qodobbada saxda ah ka mid ah ayaa kala saara a sanduuqa boostada oo ay maamusho pro oo ah wixii uu hiwaayadda ku daryeelo. Tani waa dhab ahaan waxa Outlook kuu ogolaado. Wadi sanduuqaaga email si xirfadaysan. Hadii aadan rabin inaad noqoto qofka sadex saacadood ku qaata raadinta fariinta, tirtir. Midka aan ka jawaabin shan iyo toban maalmood sababtoo ah fasax. Markaa, ogow haddii aad gacanta ku hayso Muuqaalka Muuqaalka, waxaad haysataa qalab aad u awood badan oo aad gacanta ku hayso.
Dib-u-habeynta sanduuqaaga boostada si habsami leh Muuqaalka
Waad dhihi kartaa iyadoo aan cidina kaa hor imaan karin, inaad maamusho sanduuqaaga sida ugu wanaagsan marka:
E-mayl kasta oo kugu soo gaadha ka dibna u kala sooc sida ay ugu kala mudan yihiin faylal gaar ah ama faylal hoosaad.
Waxaad haysataa batteriga waraaqaha shaqsiyeed ee gaarka ah oo diyaar u ah in la isticmaalo marka xaalado isku mid ah ay soo baxaan.
Waxaad u dejisay soo dirista jawaabta otomaatiga ah qof kasta oo warqad kuu soo qora inta lagu guda jiro fasaxaaga ama kiis kasta oo kalemaqnaansho ku meel gaar ah.
In dhammaan emails-kaaga ay la socdaan saxeex elektroonik shaqsiyeed ah oo ay la socoto astaanta shirkaddaada.
Haddii aadan joogin, waa inaad si dhakhso ah u beddeshaa habka aad u shaqeyso. Waad u hagaajin kartaa si dhakhso leh adigoon murugsanayn sida ay u muuqato. Kaliya waa inaad bilowdid isla markaana si dhaqso leh ayaad u ogaan doontaa sirta badan ee Muuqaalka. Gaar ahaan markay timaado abaabulka jadwalkaaga, ama in lagu xasuusiyo shaqooyinka qaarkood inaad qabato. Abaabulka shirarka, kulamada, feylasha si loo xiro taariikh gaar ah. Xaaladahaas oo dhan Microsoft Outlook wuxuu noqon doonaa mid waxtar badan leh.
READ Discover AccountKiller, hagaha isticmaalaha guud oo kaa caawiya inaad ka takhalusto xisaab celinta dib-u-dejinta.
Lawareego xakamaynta Muuqaalka 2013 tababarkan aadka u dhammaystiran
Tababarkan bilaashka ah waxaad ku qaadi doontaa dib-u-eegis tallaabo-tallaabo ah dhammaan walxaha sameeya Muuqaalka. Wax buuq ah ma jiro, mid kasta oo ka mid ah 44-ka fiidiyow wuxuu socdaa shan daqiiqo. Xor ayaad u tahay inaad daawato dhamaanteed ama waxaad diirada saartaa oo kaliya waxa adiga ku xiiseynaya. Dhammaan maadooyinka kuu oggolaan doona inaad si dhakhso leh u barto barnaamijka waa la daboolay. Abuuritaanka fayl, keyd toos ah oo emayllo ah, oo leh qeexitaan waxtar leh ama aan loo baahnayn. Dejinta farriimaha otomaatiga ah iyo saxiixaaga. Qaabdhismeedka hawsha, maaraynta jadwalka iyo abaabulka kulanka.
Maxaa ku cusub Muuqaalka 2016
Haddii horey lagugu tababaray nooca 2010 ama 2013, laguma jaah wareerin doono nooca 2016. Si kastaba ha noqotee waan soo sheegi karnaa raadinta la wanaajiyey iyo isku darka liistada shaygii ugu dambeeyay ee la helay iyagoo ah lifaaq. Tan ayaa iyaduna kuu oggolaaneysa inaad si dhakhso leh ugu daro iyaga farriinta la qorayo. Sidoo kale ogsoonow, suurtagalnimada maaraynta dhowr kalandarrada isku mar. Runtii wax aan caadi ahayn ma jiraan.
Maxaa ku cusub Muuqaalka 2019
Isbeddel kuma yimaado muuqaalka guud ee softiweer, laakiin warar xiiso leh. Sanduuqaaga sanduuqa ayaa hadda leh laba tab: mid ka mid ah waraaqaha mudnaanta leh iyo tan labaadna inta kale. Sidoo kale waa in la tixgeliyaa, u habboonaanta hubiyaha marin u helidda iyo sidoo kale suurtagalnimada in la dhagaysto waraaqahaas. Ma aha in la xuso dib u soo celinta noocyada aan la aqrin iyo kala shaandheynta xulashada ee ka sarreeya liiska farriimaha.
1 Ku rakib cinwaanka emaylka 2013 Muuqaalka 2013
2 Ku dar xisaabta Muuqaalka Muuqaalka 2013-ka ee labaad
3 Abuur muuqaal toos ah oo jawaab celin ah ee 2013 ah
4 Diyaarso aragtida maqnaanshaha aragti 2013 maqnaanshaha 2013
5 Beddel fursadaha raadraaca raad raac 2013 aragtida 2013
6 Maaree faylalka faylalka aragtida muuqaalka 2013
7 Maaree saxeexyada Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka 2013
8 Ku jawaab oo u gudbi aragtida emaylka 2013 aragtida 2013
9 La dagaallanka aragtida spam 2013 aragtida 2013
10 Qeex aragtida spam e-maylka aragtida 2013 aragtida 2013
11 Ku dar aragti RSS feed 2013 aragtida 2013
12 U dir emayl dhowr weriye aragtida aragtida 2013 ee 2013
13 Daabacaadda aragtida farriinta sannadka 2013
14 Keenso waxyaabo kala duwan Muuqaalka Muuqaalka 2013
15 Tirtir Muuqaalka Muuqaalka 2013 Muuqaalka 2013
U dhig sanduuqaaga boostada sidii sanduuq muusig 26-Abriil, 2020Tranquillus
horeQaaciddada wanaagsan ee akhlaaqda wanaagsan ee emaylkaaga
socdaSidee loo habeyn karaa aasaaska aasaasiga ah ee Microsoft Word?